အခွင့်အလမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, မေလ 6, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ဒီနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာဒေသဆိုင်ရာဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။ ၀ န်ထမ်းအသစ်များကိုမီဒီယာအသစ်များနှင့်ပြသရန်ကြိုတင်ကြံစည်ထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတွေ့ရ။ ၀ မ်းသာသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည်သေချာပေါက်ပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်သော်လည်းလူမှုရေးမီဒီယာများက 'လူငယ်များလုပ်နေသောအရာ' ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလေးအနက်ထားစဉ်းစားခြင်းမရှိသေးသည့်အလားအလားသဏ္changingာန်တူနေသေးသည်။
အဆိုပါသတင်းစာစက်မှုလုပ်ငန်း - လွဲချော်အခွင့်အလမ်းများ
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်တုန်းကငါသတင်းစာတွေနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ကို eBay နှင့် Craigslist။ သူတို့ကဒါမျိုးကို geeks နှင့်လူငယ်များအတွက်သာထင်သည်။ ဒေါ်လာဘီလီယံတန်ကော်ဇောသည်သူတို့အောက်မှဆွဲထုတ်သည်အထိဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ဒါဟာတကယ်ကိုနင်မဆွဲထားတာ၊
သတင်းစာအတော်များများကထိုနည်းပညာများ၏တိုးတက်မှုအပေါ်ကြောက်ရွံ့စွာရေးသားခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းများပျက်စီးသွားလိမ့်မည်ကိုမေ့ ထား၍ ဖြစ်သည်။ သတင်းစာအတော်များများသည်အွန်လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ခြေချောင်းများရှိကြသည် (InfiNet သည်ကျွန်ုပ်၏ပင်မကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်) သို့သော်၎င်းတို့သည်လိုအပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်တွင်…အစပျိုးလုပ်ဆောင်ရန်မအောင်မြင်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အချိန်ရှိသေးသည်ကိုပင်သူတို့သိထားသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်း၏အမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာလိုင်းများကိုရေးဆွဲထားပြီးမည်သည့်မန်နေဂျာမှဤကမ္ဘာသစ်ကိုမလိုက်နာရန်မာဂျင်၏ ၅၀% ကိုမယူတော့ပါ။
အရှုံးကိုတွန်းလှန်ရန်အတွက်သတင်းစာများနှင့်ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များရှိသည်။ သူတို့ကဒေသတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှတ်တံဆိပ်၏ပင်အားသာချက်ပင်ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလိုက်လျောညီထွေဖြစ်မယ့်အစားသူတို့ကလက်ချောင်းတွေကိုညွှန်ပြပြီးနားမလည်တဲ့နောက်မန်နေဂျာတစ်ယောက်ကိုလဲလဲလှယ်တယ်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းသတင်းစာ၌ကျွန်တော်တစ် ဦး တစ်ယောက်က ၀ င်ရောက်လာပြီးနည်းပညာအသစ်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန်သို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့ကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရန်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိတော့ပါ။
Burj Dubai - အစိုင်အခဲဖောင်ဒေးရှင်း
ငါ့တင်ဆက်မှုမှာဆလိုက်တွေထဲကတစ်ခုကဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ခုပါ Burj ဒူဘိုင်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်အခြားအဆောက်အအုံများအားလုံးအထက်တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းကိုနောက်နှစ်အကုန်တွင်ပြီးစီးရန်စီစဉ်ထားပြီးလက်ရှိတွင်ပုံပြင် ၁၆၂ ခုရှိသည်။
၁၆၂ ပုံပြင်များသည်နောက်ဆုံးခန့်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများ၏ခန့်မှန်းချက်အရအခြေခံအဆောက်အအုံ၏ခိုင်ခံ့မှုနှင့်အဆောက်အအုံကိုမည်မျှမြင့်တက်စေနိုင်ကြောင်း၊ တတျနိုငျသ ထမြောက်စေပါ
အဆောက်အ ဦး ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသင်စပြီးနားလည်နိုင်ပါပြီ။ Burj Dubai ၏အုတ်မြစ်သည်ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည်။
Social Media - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်း
လူမှုမီဒီယာသည် သင့်ကုမ္ပဏီ လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးထွားမှုအတွက်အုတ်မြစ်တစ်ခုစတင်ရန်အခွင့်အလမ်း။ ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်လူမှုရေးကွန်ယက်များမှတဆင့်အွန်လိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဆက်သွယ်မှုခိုင်မာရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။
၀ က်ဘ်ကဲ့သို့ပင်ယနေ့တွင်စတင်ခြင်းသည်လာမည့်နှစ်များအတွင်းစီးပွားရေးအမြောက်အမြားကိုဖမ်းယူရန်အတွက်ကြီးမားသောပိုက်ကွန်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ရှုခင်းကပြောင်းလဲနေပြီ။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ - ဂူဂဲလ်ပင်လျှင် - ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ကိုမည်သို့ ၀ င်ရောက်သည်ကိုသူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအချို့ဆုံးရှုံးလိမ့်မည် မိုက်ခရို ကွန်ရက်များ ထဆက်လက်ရှင်သန်ဆက်လက်။
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဤနည်းပညာများကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းသည်သင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယနေ့ငါပြောသောကုမ္ပဏီတွင်ထူးခြားသောအခွင့်အရေးများရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပြီးခိုင်မာသောအရည်အချင်းများရှိပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိသောဝါကျများနှင့်မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ကြီးထွားလာသည်။
အကယ်၍ သူတို့၏ ၀ န်ထမ်းများကထိုအတွေ့အကြုံများကိုအွန်လိုင်းမှမျှဝေလျှင် ယနေ့တွင် နှင့်ထူထောင် အွန်လိုင်း အခွင့်အာဏာ၊ အထူးသဖြင့်ပထဝီအနေအထားအရ၎င်းသည်နက်ဖြန်မနက် ၄ င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ရန်ကွန်ယက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့်ဒီကုမ္ပဏီအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။ သူတို့ဟာစိတ်သဘောထားကျယ်ပြန့်ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားပေမယ့်ဒီနေရာမှာမြန်ဆန်စွာလိုက်လျောညီထွေရှိအောင်သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
Tags: analyticsSearch ကိုစျေးကွက်
Myers-Briggs ကိုယူခဲ့တာလား။ ENTP?
မေလ 6, 2008 မှာ 11: 53 AM
ခြုံငုံပြောရရင်တော့ မင်းပြောနေတဲ့ အခြေခံမူတွေကို ငါသဘောတူတယ်။ သို့သော်လည်း Social Media သည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ကြီးထွားလာနေသော အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ တင်ဆက်မှုအတွင်း သင်ဤသို့လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း၊ လူမှုမီဒီယာကို အမျိုးအစားများခွဲကာ အမျိုးအစားတစ်ခုစီကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်အတွက် မည်သို့အသုံးချနိုင်သည်ကို သရုပ်ပြခြင်းသည် ထိုက်တန်ပါသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် အဓိကအားဖြင့် ပမာဏကို မျှဝေသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တွင် သင်မျှဝေလိုသော အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ၎င်းတို့ကို သင်မည်ကဲ့သို့ မျှဝေလိုသည်တို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်စေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်စေ အတွေးအမြင်များကို အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာပုံစံများစွာဖြင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။ ဗီဒီယိုမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ ဆိုင်ခွဲအရေအတွက်သည် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးလာနေသည်။ အမှန်တကယ်တော့ Social Media နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့ မျဉ်းဆွဲရမယ့်နေရာကို ရှုပ်ထွေးဖို့ မြန်လိုက်တာ။
သို့သော် သတိထားရမည့်အချက်မှာ သင့်အမှတ်တံဆိပ်၊ အသိပညာအခြေခံ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်သည် Social Media အတွင်းသို့ အနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ တူးဖော်ပြီးသည်နှင့် ရရှိမည့် သတိပြုရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများအရ အင်တာနက်အသုံးပြုသူများ တိုးပွားလာသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်မှ ထိပ်တန်းဆိုက်များသို့ လမ်းကြောင်းအသွားအလာမှာ တူညီသောနှုန်းဖြင့် ကြီးထွားမလာဘဲ အချို့ကိစ္စများတွင်ပင် လျော့နည်းသွားကြောင်း မကြာသေးမီက လေ့လာမှုများအရ သိရသည်။ အကြောင်းမှာ Social Media ကို အသုံးပြု၍ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး စုစည်းထားသော အကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှုနေသူများကြောင့် ဖြစ်သည်။
မေလ 6, 2008 မှာ 6: 54 pm တွင်
တင်ဆက်မှုသည် မတူညီသော ကြားခံများနှင့် နည်းပညာများကို ကွဲပြားစေရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပြီး တစ်ခုချင်းစီကို လူမှုကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ခြင်းမှ ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်းအထိ တွစ်တာအထိ စသည်တို့ကို အသုံးချပုံတို့ကို ကွဲပြားသွားစေပါသည်။ နည်းပညာတစ်ခုစီ၏ တိုင်းတာနိုင်သော (မတိုင်းတာနိုင်သော) သက်ရောက်မှုအချို့ကို ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။
ပို့စ်တစ်ခုထဲတင်ဖို့ အရမ်းများနေမှာ သေချာပါတယ်။ ဤသည်မှာ တစ်နာရီခန့်ကြာသော စကားဝိုင်းဖြစ်သည်။ 🙂
စာဖတ်သူများကို အလေးပေးပြောကြားလိုသည်မှာ ယနေ့မှစတင်၍ 'စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခြင်း' သဘောထားမျိုး မရှိပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် သင့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အနာဂတ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Michael သင်သည် အကြောင်းအရာကို အရောင်ထည့်သည့် ထဲထဲဝင်ဝင် မှတ်ချက်များ အမြဲပေးသည်။ ငါ မင်းကို တကယ်ပျော်ပြီး မင်းဘလော့ဂ်ကို ဝင်ကြည့်ဖို့ လူတိုင်းကို အားပေးတယ်။
မေလ 6, 2008 မှာ 3: 09 pm တွင်
90 အလယ်လောက်မှာ Boston Globe မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ၎င်းတို့သည် ဝဘ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အသိအမှတ်ပြုရုံသာမက ၎င်းကို အခွင့်ကောင်းယူရန် ပထမဆုံးသောသူများထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ http://www.boston.com
မေလ 6, 2008 မှာ 6: 58 pm တွင်
မင်္ဂလာပါ Jayce! ဟုတ်တယ်၊ Boston Globe ဟာ 90 နှောင်းပိုင်းတွေမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဒေတာဘေ့စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ် (နှင့် အခြားသူများ) တီထွင်ခဲ့သော ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာ ကိရိယာအချို့ကိုပင် အသုံးပြုခဲ့သည်။
Toronto Globe and Mail၊ Houston Chronicle၊ San Francisco Chronicle၊ Chicago Suburban သတင်းစာများနှင့် Detroit Press ကဲ့သို့သော အခြားသော သတင်းစာများသည် နည်းပညာသစ်များတွင် အနည်းငယ် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည်။ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းပျော်တယ်။
မေလ 6, 2008 မှာ 3: 37 pm တွင်
ဤရှိပြီးသား လုပ်ငန်းများသည် အဘယ်ကြောင့် မပြောင်းလဲသနည်း။ HUGE inertia သည် တူညီသောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Christensen သည် ၎င်းကို အလွန်ကောင်းမွန်စွာ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပါတီထွင်ရဲ့အကျပ်ရိုက်မှု.
မေလ 6, 2008 မှာ 7: 01 pm တွင်
ပြီးပြည့်စုံသော ဥပမာ။ တခါတရံမှာ လူတွေက 'ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးအောင်လုပ်မလဲ' လို့ မေးကြပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်နေသရွေ့ သူတို့ကို မပြောပါနဲ့တော့။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် ကုမ္ပဏီများသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည် သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့် ခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်သည်။ နှစ် 100 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ ကြာနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပျက်သုဉ်းဆဲဖြစ်သည်။
မေလ 10, 2008 မှာ 8: 35 AM
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ရှိ စက္ကူဖြူကြီးကို သင့်ဖောက်သည်များထံ ပေးပို့လိုပါက၊ ဗန်ကူးဗားရှိ smashLAB မှ ၎င်းကို ကြည့်ရှုပါ။